दाङदेखि बटौलीसम्म – www.janabato.com
५ श्रावण २०७५, शनिबार ०२:३५ July 21, 2018 जनबाटो मिडिया प्रा.लि.
-पद्मप्रसाद शर्मा –
खुलासत्र समापनपछि मैले केन्द्रीय अध्यक्ष मातृका पोख्रेललाई “हामीले अव विदा माग्यौं ।” भने । मेरो कुरा सुनेर मुस्कुराउँदै उहाँले रुपन्देही शाखाका अध्यक्ष प्रदीप प्रधानतर्फ औंल्याउँदै भन्नुभयो “यहाँबाट विदा दिने काम मेरो होइन आजका अध्यक्षको हो ।” मैले विदाइका लागि प्रदीप प्रधानतर्फ नजर लगाएँ । उहाँले मलाई एकसरो हेर्नु भएको थियो सभाहलको वीच भागबाट आवाज आयो–“आजका अतिथि सबैलाई कार्यक्रम अवधिभर विदा दिनु हुन्न ।” भन्ने । मैले भने “अतिथिको काम खुला सत्र सम्पन्न गर्नु हो, पहिलो सत्र सम्पन्न भयो अवको वाँकी काम भनेको तपाईहरुको नै हो हामीलाई सजिलो गरी विदा दिनुभयो भने अतिवेश हुने थियो ।” मेरो कुरा सुनेर सहभागी मध्ये निकै जना मुस्कुराउनु भयो । प्रदीप प्रधानले कार्यक्रम सञ्चालक सचिव हृदय लेकालीतर्फ नजर लगाउनु भयो अनि उहाँ रोष्टममा पुगेर “आजका हाम्रा विशिष्ट अतिथि एवं प्रगतिशील लेखक सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पद्मप्रसाद शर्मा र राष्ट्रिय परिषद सदस्य केशव थापालाई विदाइका लागि सबै सहभागी मित्रहरुलाई तालिले सम्मान गरी विदाई गरिदिन अनुरोध गर्दछु ।” भन्नुभयो । सबै सहभागी मित्रहरुले तालीद्वारा सम्मान र विदाइ गर्नु भएपछि हामी दुवैले हात उठाएर सम्मान ग्रहण गर्दै रुपन्देही जिल्ला शाखाको न्यानो माया मुटुमा साँचेर सभाकक्षबाट बाहिर आयौं ।
२०७३ साल भाद्र ३१ गते विहान ५.४५ मा हामी काठमाडौका लागि छुटेको बसबाट बुटवलको लागि यात्रा थालेका थियौं । झण्डै एकसाता अघि रुपन्देही शाखाका अध्यक्ष प्रदीप प्रधानले शाखाको सातौं अधिवेशनका लागि तीस गते नै आइदिनुहोला भनेर निम्तो दिनु भएको थियो । अघिल्लो दिनको हाम्रो उपस्थितिको खासै काम थिएन । हामीले समय सदुपयोग हुने भएकोले ३१ गते नै जाने निधो गरेका थियौं । विहान घोराहीबाट गाडी अगाडी बढनुसंगै हामीले दिनभरको योजना बनायौं । हामीले बनाएको योजनामा रुपन्देही शाखाको खुला सत्र सकिदा साथ दाङतर्फ फर्कने पनि थियो । काठमाडौ जानका लागि छुटेको वस कहिले पट्यार लाग्नेगरी गुड्ने मात्र नभएर रुक्ने पनि गर्दछन् । गाडी लाइन आश्चर्य लाग्दो हुन्छ । तर हामीले गाडीचालकलाई हाम्रो कार्यक्रमको वारेमा जानकारी गराउँदै समयमा पुग्नपर्ने कुरा राखेका थियौं । चालकले समयलाई ध्यान दिने कुराको आश्वासन दिएका थिए । उनले विश्वास दिए अनुसार काम पुरा गरे । बुटवलस्थित नयाँ बसपार्क नजिक ओर्लने क्रममा हामीले उनलाई धन्यवाद दिएका थियौ । सायद अहिलेसम्म कुनै यात्रुले उनलाई धन्यवाद दिएको थिएन कि चालक खुशीले निकै गद्गद भए । यो मजदूरको सम्मान पनि हो । प्रतिकृयामा उनले “सरहरुलाई समयमा ल्याइपु¥याउन पाएकोमा म पनि खुशी छु दुवैजना सरहरुको दिनभर राम्रोसंग वितोस् ।” भनेर सम्मान तथा शुभकामना ब्यक्त गरेका थिए । यसलाई मजदूरबाट पाएको अपार माया भन्नु पर्दछ ।
हामी कार्यक्रम स्थल पुग्नुसंगै केन्द्रीय पाहुनाको आगमनको प्रतीक्षामा रहनु भएका साथीहरुबाट राम्रो आतिथ्यता मिल्यो । झण्डै एक दशक पहिले चार महिनाजति रुपन्देहीको भैरहवामा विताउने अवसर मिलेकाले मेरा लागि वुटवल भैरहवा नयाँ स्थान थिएन । निकैजना पूर्व परिचित साथीहरुसंग पुनर्मिलन भयो । दाङमै बसेर पटक–पटक फोनमा सम्पर्क भईरहने डाक्टर गितु गिरी र डाक्टर कपिल लामिछानेसंग भने भेट हुन सकेन । तर गजलकार वुँद रानासंग राम्रो भलाकुसारी भयो । डाक्टर कपिल लामिछानेले कार्यक्रम आरम्भ हुनु अघि प्रलेस रुपन्देहीले निम्तो दिएको र आफू कार्यक्रममा आउने आश्वासन दिनु भएको जानकारी फोन मार्फत गराउनु भएको थियो तर कार्यक्रम आरम्भ भएर खुला सत्र सकिदासम्म पनि उहाँहरुलाई भेट्न पाईएन । भैरहवाका रुद्र शर्मा दुःखीले निकै खुशी ब्यक्त गर्नुभएको अहिले पनि मनमा ताजै छ र सधै संझनामा रहनेछ ।
पाँच नम्वर प्रदेशमा रहेका १२ जिल्लामा सबै जिल्लामा शाखा गठन भएका छैनन् । झण्डै आधा जिल्लामा शाखा गठन गर्नुपर्ने काम वाँकी छ । यसै क्रममा रुपन्देही जानु दुईदिन अघि मैले शाखा गठन भएका र नभएका सबै जिल्लामा सम्पर्क गरेको थिएँ । शाखा गठन भएका जिल्लाको कार्यविवरण र शाखा गठन हुन वाँकी जिल्लामा शाखा गठन गर्न पर्ने विधिको वारेमा कुरा भएको थियो । शाखा गठन हुन वाँकी मध्येमा नवलपरासीमा डा. धनपति कोइराला र मुक्तिराम पाण्डे । अर्घाखाँचीमा ज्ञान बहादुर क्षेत्री र हिम लेकालीसंग कुरा भएको थियो भने गुल्मीमा माधव ज्ञवालीसंग सम्पर्क भएको थियो । यसैगरी कपिलवस्तुमा लालकृष्ण पौडेल अनि पाल्पामा टंक पन्त र रामप्रसाद अर्यालसंग सम्पर्क भएको थियो भने रुकुममा कमप्रसाद देवकोटा र नदिराम के.सीसंग कुरा भएको थियो । सबै साथीहरुले एकसाताभित्र तदर्थ समिति गठन गरिसक्ने आश्वासन दिनु भएको थियो । यी पंक्ति कोरीरहँदा रुकुममा नदिराम के.सीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय तदर्थ समिति गठन भएको र आउँदो मार्ग २५ गते अधिवेशन गर्ने जानकारी दिनु भएको छ भने अन्य जिल्लामा भेला हुनेवारेमा छलफल चलेको जानकारी दिनु भएको छ ।
पाँच नम्वर प्रदेशमा रहेका सबै जिल्लामा शाखा गठन र परिचालनको क्रममा हामी रुपन्देही शाखाको कार्यक्रममा सहभागि भएका थियौं । नयाँ संविधानले प्रान्तको ब्यवस्था गरे अनुसार हामी पनि अभ्यासमा लागेका छौं ।
सबै जिल्लामा शाखाको कार्य सकेर प्रदेशको भेला गरी समिति गठन गर्नुपर्ने कार्यभार पनि हाम्रै काँधमा रहेकाले यसतर्फ अलिक बढ्ता ध्यान दिन आवश्यक थियो । त्यसकै सेरोफेरोमा रहेर एकसाता अघि दाङमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्य.र पार्षदहरुसंग एकसरो सल्लाह समेत भईसकेको अवस्था थियो । वर्तमानमा पाँच नम्वर प्रदेशको राजधानी दाङ बनाउने चर्चा चलेसंगै प्रान्तीय भेला पनि दाङमा राख्दा अनुपयुक्त नहुने धारणा निकै साहित्यकारहरुबाट आइरहेको छ । अन्य जिल्लाका साहित्यकारको मनोभावनालाई पनि मध्यनजर गरेर भेलाको आयोजना गर्नुपर्ने छ । रुपन्देही शाखाको सातांै अधिवेशनमा पनि प्रगतिशील लेखक सङ्घको प्रान्तीय भेलाका वारेमा सामान्य चर्चा भएको त हो तर पूर्वको नवलपरासी, उत्तर पूर्वको पाल्पा र गुल्मीलाई पनि पायक पर्ने अनि पश्चिमको वाँके र वर्दियालाई ध्यान दिनुपर्ने छ साथमा उत्तरको रुकुमलाई पनि पायक पर्ने गरी स्थान चयन गर्नुपर्ने छ । हामी वटौलीतर्फ प्रस्थान गर्दै गर्दा बाटोमा केशव थापासंग यसका वारेमा पनि चर्चा गरेका थियौं । यस्तै चर्चा छलफल र योजनाको कुरा गर्दा गर्दै हामी वुटवलको नयाँ वसपार्क नजिक उत्रेर न्यू इरा होटलमा केन्द्रीय अध्यक्षसगैं बसेर खाना खाएर कार्यक्रम स्थलतर्फ लाग्ने मौका जुरेको थियो ।
शाखा अधिवेशन आरम्भ हुनु अघि निकैजना साथीहरुसंग भलाकुसारी भयो । हाम्रा लागि पहिलो सुखद पक्ष त्यही थियो । निकै वर्ष वितेछन् दिल साहनीसंग सम्पर्क नभएको । यसपटक दिल खोलेर रहर लाग्दा कुराहरु भए । अधिवेशनको पाटो पहिलो भए पनि वर्षौं पछिको भेटघाट हाम्रा लागि पहिलो हुन गयो । उद्घाटन सत्र साथीहरुले निकै छरितो बनाउनु भएको रहेछ । वास्तवमै कार्यक्रम यस्तै बनाउन सके राम्रो मानिन्छ । वक्ताहरु पनि कम र वक्ताका लागि समय पनि कम निर्धारण गर्नु भएको रहेछ । छोंटो समयमा शुभकामना आदान प्रदान भयो । वक्ताहरुमा प्राध्यापक एवं प्रलेसका र्वामान केन्द्रीय सदस्य गोपिरमण उपाध्यायले भने केन्द्रप्रति थोरै असन्तुष्टि राख्नु भएको थियो । केन्द्रीय अध्यक्ष र उपाध्यक्षले भ्रम निवारण गरेपछि उहाँ पनि प्रसन्न मुद्रामा देखिनु भयो । खुला सत्रमा लामो समय खर्च गर्नु भन्दा वन्दसत्रमा लामो छलफल गर्दा वेश हुने कुरा हामीलाई पनि राम्रो लाग्यो । हामीले पनि खुलासत्र छरितो वनाउने सल्लाह दिएका थियौ । उहाँहरुको आफ्नो कार्यक्रममा पनि त्यस्तै छोंटो मिठो रहेछ ।
प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपाल रुपन्देही शाखाले यस अघि छ वटा अधिवेशन सकेर २०७३ साल भाद्र ३१ गते सातौं अधिवेशनमा जुटेको हो । सातौं अधिवेशनसम्म आउँदा उक्त शाखामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको कुरा सुनाउनु भएको थियो । यसपटकको कार्य समितिको बनावटको जानकारी लिँदा मेहनत गरिरहेका छौं सकेसम्म सर्वसम्मत बनाउँछौ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । साँच्चिकै भनेकै जस्तै गर्नुभएछ । पुराना र पाका साहित्यकार देवेन्द्र घिमिरेको अगुवाईमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको कुरा प्रदीप प्रधानले सोही दिन साँझ फोनबाट जानकारी दिनु भएको थियो । मनभरीको धन्यवाद रुपन्देही शाखालाई र यस शाखामा आवद्ध सम्पूर्ण मेरा मित्रहरुलाई । धन्यवाद !
(स्रोत–प्रलेस रुपन्देही, पूर्णाङ्क–३)
← जुवाको खालमा भेटिए पाल्पामा जनप्रतिनिधि
पहिचान सहितको ५ नं. प्रदेश नामाकरण गर्न आदिवासी जनजातिको माग →
८ माघ २०७५, मंगलवार १३:२८ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on कृषकहरु कोदो खेतीप्रति आकर्षित
१६ माघ २०७४, मंगलवार १३:४७ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on बुटवल फुलवारीमा ‘ऐतिहासिक जीतगढी किल्ला बचाउ अभियान’ टोलीले फहरायो राष्ट्रिय झण्डा (फोटो सहित)